Xinhua Myanmar - အီရတ်နိုင်ငံ ဘဂ္ဂဒက်မြို့တွင် အသေခံဗုံးခွဲမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် လူ ၃၂ ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကာ ၁၁၀ ဦး ဒဏ်ရာရ
အီရတ်နိုင်ငံ ဘဂ္ဂဒက်မြို့တော်တွင် အသေခံဗုံးခွဲမှုများကြောင့် ဈေးအတွင်း ပျက်ဆီးနေမှုများကို ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) Africa & Middle East
အသေခံဗုံးခွဲသမားတစ်ဦးက Bab al-Sharji နယ်မြေရှိ လူထူထပ်သော ဈေးတစ်ခုတွင် ဖောက်ခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အကြာ၌ ၎င်းဈေး၌ပင် နောက်ထပ် အသေခံဗုံးခွဲသမားတစ်ဦးက ထပ်မံဖောက်ခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးက ဆင်ဟွာသို့ ပြောခဲ့သည်။
အီရတ်နိုင်ငံ ဘဂ္ဂဒက်မြို့တော်တွင် အသေခံဗုံးခွဲမှုများကြောင့် ဈေးအတွင်း ပျက်ဆီးနေမှုများကို ဇန်နဝါရီ ၂၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပထမ အသေခံဗုံးခွဲသမားသည် Bab al-Sharji နယ်မြေရှိ အထည်ဟောင်းရောင်းဝယ်သော လူစည်ကားရာ ဈေးတစ်ခုတွင် ၎င်းအနေဖြင့် နေမကောင်းဖြစ်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ရာ ၎င်းအားကူညီရန် အနီးဝန်းကျင်သို့ လူအများစုဝေးရောက်ရှိလာစဉ် ဗုံးဖောက်ခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Khalid al-Mahana က သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် ဒုတိယမြောက် အသေခံဗုံးဖောက်ခွဲသူသည် အဆိုပါဈေး၌ပင် ပထမအကြိမ်ဗုံးပေါက်ကွဲမှု၏ ဒဏ်ရာရသူများကို ကူညီရွှေ့ပြောင်းရန် လူအများစုဝေးနေချိန်၌ ဖောက်ခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း al-Mahana က ပြောခဲ့သည်။
အီရတ်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Hassan al-Tamimi က ဘဂ္ဂဒက်မြို့ရှိ ဆေးရုံများ၌ သေဆုံးသူ ၃၂ ဦး၏ ရုပ်အလောင်းများ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းနှင့် ဒဏ်ရသူ ၁၁၀ ခန့် ဆေးကုသရန် ရောက်ရှိနေခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒဏ်ရာရရှိသူအများစုကတော့ ဆေးကုသမှုခံယူပြီး ဆေးရုံတွေက ဆင်းသွားခဲ့ပါပြီ။ နောက်ထပ် ၃၆ ဦးလောက်ပဲ ဆက်လက်ကုသဖို့ ကျန်ပါတော့တယ်” ဟု al-Tamimi က ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲရာနေရာကို လုံခြုံရေးစည်းတားထားသလို လမ်းများကို ပိတ်ထားလိုက်ကြောင်း၊ ဆေးရုံကားများနှင့် အရပ်သားများ၏ ကားများကလည်း ဒဏ်ရာရလူနာများကို အနီးဝန်းကျင်ရှိဆေးရုံများနှင့် ကျန်းမာရေးစင်တာများသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အီရတ်နိုင်ငံ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Yahia Rasoul က လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များသည် အသေခံဗုံးခွဲသမားများ၏ အကြောင်းကို သတင်းရရှိခဲ့ကြောင်းနှင့် ပေါက်ကွဲမှုများမဖြစ်ပေါ်မီ ၎င်းတို့ကို ခြေရာခံလျက်ရှိကြောင်း၊ သို့သော် ထိုအချက်ကြောင့်ပင် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ချက်ချင်း အလျင်အမြန် ဗုံးဖောက်ခွဲလိုက်ဖွယ်ရှိကြောင်း ဘဂ္ဂဒက်ရှိ ဆေးရုံများတွင် ရောက်ရှိနေသော ဒဏ်ရာရသူများထံသို့ သွားရောက်ခဲ့စဥ် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားထားသည်။
အဆိုပါ အသေခံဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုများကို စီစဉ်မှုနှင့် ပြင်ဆင်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသူကို ရှာဖွေရန် Rasoul က ကတိပြုခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အီရတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Mustafa al-Kadhimi က မကြာသေးမီက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော လုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရန် ဘဂ္ဂဒက် စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌာနချုပ်တွင် လုံခြုံရေးနှင့် ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိများနှင့် အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ခုအား ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း al-Kadhimi ၏ ပြန်ကြားရေးရုံးအရ သိရသည်။
Al-Kadhimi က အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အသေခံဗုံးခွဲသူများ ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များကို ရှာဖွေဖမ်းဆီးရန် ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
အရပ်သားများကို တိုက်ခိုက်ခြင်းသည် “အကြမ်းဖက်မှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စစ်ပွဲကို ဆက်လက်တိုက်စေဖို့ အတည်ပြုပေးလိုက်တာဖြစ်သလို အီရတ်ရဲ့ နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ အကြွင်းအကျန်တွေကို နောက်မဆုတ်ဘဲ ချေမှုန်းသွားမယ်” ဟု ၎င်းက ထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားထားသည်။
ထို့ပြင် ဘဂ္ဂဒက်မြို့တော်တွင် လုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသော လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကို ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်သွားရန်လည်း Al-Kadhimi က ကတိပြုထားကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
အီရတ်နိုင်ငံ သမ္မတ Barham Salih ကလည်း အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုမှာ “အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေက နိုင်ငံရဲ့ အဓိက နိုင်ငံရေးခြေလှမ်းတွေကို ပစ်မှတ်ထားဖို့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေလို့ အတည်ပြုလိုက်တာပါပဲ” ဟု ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ရည်ညွှန်းလျက် တွစ်တာ၌ ရေးသားခဲ့သည်။
အီရတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Fuad Hussein က “ဒေသတွင်း တင်းမာမှု ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာက အီရတ်နိုင်ငံရှိ ပြည်တွင်းရေးလုံခြုံမှု အခြေအနေကို သက်ရောက်မှုရှိတယ်” ဟု ဗုံးဖောက်ခွဲမှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောကြားထားသည်။
အိုင်အက်စ်အဖွဲ့၏ စစ်သွေးကြွများက “အီရတ်ရှိ နေရာအတော်များများမှာ တက်ကြွလှုပ်ရှားနေကြပြီး ပြည်တွင်းရေး ခြိမ်းခြောက်မှုတွေလည်း ရှိနေဆဲပဲ” ဟု ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၌ မည်သည့်အဖွဲ့ကမျှ ၎င်းတို့၏လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ယူပြောကြားထားခြင်းမရှိသေးပေ။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-01-22 02:10:54|Editor: huaxia
BAGHDAD, Jan. 21 (Xinhua) -- A rare twin suicide bomb attacks in central Baghdad on Thursday morning killed up to 32 and wounded 110 others, breaking months of relative calm in the Iraqi capital, security sources and Iraqi Health Ministry said.
No group has claimed responsibility for the attack, but the militants of the extremist Islamic State (IS) group, in most cases, are responsible for such suicide attacks targeting security forces and crowded areas including markets, cafes, and mosques across Iraq. Enditem
1-5 Photo taken on Jan. 21, 2021 shows the market damaged by suicide bombings in Iraq's capital Baghdad. At least 32 people were killed and 110 others wounded on Thursday in the twin suicide bombings in Iraq's capital Baghdad, Iraqi Health Minister Hassan al-Tamimi said. Baghdad's hospitals received 32 bodies, while 110 wounded people were admitted for treatment, al-Tamimi said inastatement. Earlier in the morning,asuicide bomber blew up his explosive belt inacrowded outdoor clothing market in Bab al-Sharji area, beforeasecond one detonated hisafew minutes later in the same market, an Interior Ministry source told Xinhua on condition of anonymity. (Xinhua)
Previous Article တိုကျို အိုလံပစ် ကျင်းပရန် ပယ်ဖျက်ကြောင်းသတင်းကို ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် IOC တို့ ငြင်းဆို
Next Article အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ နိုင်ငံများတွင် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံသည့် လုပ်ငန်း တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်